Umatshini womatshini we-cnc we-cnc Umatshini, abaThengisi -iTshayina abavelisi boomatshini be-cnc abaThengi beChina
I-1325 ezine spindle ngomgca ...
Inkqubo yoqoqosho ezine R4 ye ...
Uyilo olutsha ezine i-spindle ATC ...
Ngumatshini wokuchwetheza we-6090 mini weinkuni
Olu luhlu lweemodeli zinamandla ekusebenzeni, kulula ukuyisebenzisa, lihlala ixesha elide kwaye lithembekile, kwaye lisetyenziswa ngokubanzi ekuqhubekeni nasekuphumezeni imiqondiso eyahlukeneyo yentengiso, i-nameplates, iibheji, amatywina, imiqondiso, iimodeli zezakhiwo, iipaneli zezixhobo, iimveliso zomsebenzi wamaplanga kunye nezinye iimveliso Inokuqosheliswa kwizitikha, ubhedu, ialuminium, isinyithi seplastikhi okanye izinto ezingasetyenziswanga.
I-1212 yentengiso ye-cnc router mahcine
Uluhlu lohlengahlengiso lwesantya sombane we-engra yentloko. Uluhlu ngokubanzi lohlengahlengiso olujolise kumawaka amahlanu ukuya kuma-30,000 emvukelo ngomzuzu. Ukuba isantya asinakuhlengahlengiswa okanye uluhlu lohlengahlengiso lincinci, ke uludwe lwesicelo somatshini wokukrola Isithintelo kakhulu kuba izixhobo ezahlukeneyo kufuneka zikrolwe kusetyenziswe isantya esentloko sokukrola.
Umatshini we-1325 we-cnc yomatshini we-cnc
Lo matshini we-c25 womatshini we-cnc usetyenziselwa ukucheba iinkuni kunye nokubaza. Ayisiyiyo kuphela imveliso eyahlukeneyo ye-2d ekwanokuvelisa iimveliso ezingama-3d. Kungenxa yokuba umatshini wethu wokwenza iinkuni u-1325 unokwahlulwa ube zi-axis ezi-3 kunye noomatshini be-axis abangama-4, unokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zemveliso yabathengi. Apha ngezantsi kukho imifanekiso yoomatshini bobabini.